WARBIXIN:Bukayo Saka, Alisson & Mason Greenwood Oo Hogaaminaya 10-ka Xiddig Ee Ugu Fiican Premier League Todobaadkan. – Kooxda.com
HomePremier LeagueWARBIXIN:Bukayo Saka, Alisson & Mason Greenwood Oo Hogaaminaya 10-ka Xiddig Ee Ugu Fiican Premier League Todobaadkan.
Kulamada horyaalka premier League ayaa si xawli ah u socda tan ilaa markii dib loo bilaabay xilli ciyaareedka kadib 3 bilood oo aan la ciyaarin sabab la xidhiidha xanuunka Koroan.
Iyada oo kaliya 5 kulan ka hadheen dhamaadka xilli ciyaareedka waxa haatan lagu sii dhawaanayaa dhamaadka 2019/2020 iyada oo kooxuhu doonayaan in ay ku dhamaystaan sida ugu fiican.
Dhanka kale xiddigaha ayaa doonaay in ay is muujiyaan kulamada ugu dambeeya waliba soo bandhigaan qaab ciyaareed cajiib ah si ay si fiican ugu dhamaystaan xilli ciyaareedka.
Wargayska Daily Mail ayaa soo saaray qiimaynta 10-ka xiddig ee ugu fiican kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka premier Legaue:
Kooxda Man United ayaa gaadhay 3 guul oo xidhiidh ah iyo 8 kulan oo bilaa guuldaro ah kadib markii ay ay xasuuqeen kooxda Bournemouth Waxana ay Red Devils qaab ciyaareedka uga mahad celinaysaa xiddiga Bruno Fernandes kaas oo qaab ciyaareed cajiib ah ku jira tan ilaa markii uu ku soo biiray kooxda.
Chelsea ayaa ku soo laabatay wadada guulaha sabtidii kadib markii ay garaaceen kooxda Watford waxana door muhiim ah ka qaatay guushaas xiddiga Willian kaas oo soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare ah gool-na u dhaliyay kooxdisa.
Xiddigan 18 jirka ah ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah kulankii ay kooxdiisu xasuuqday Bourenmouth isaga oo dhaliyay 2 gool siina wada qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee uu soo bandhigay xilli ciyaareedkan.
Pep Guardiola ayaa sii waday siyaasadiisa is badalka waxana uu kaydka dhigay xiddiga Kevin De Bruyne laakiin waxa uu ka shaleeyay arintaa iyada oo kooxdiisu guuldaro la kulantay laakiin xiddiga ayaa ah xiddiga khadka dhexe ee ugu fiican xilli ciyaareedkan waxana uu sameeyay caawin badan iyo fursado badan.
Liverpool ayaa ku soo laabatay wadada guulaha kadib markii ay Axadii kabaha la dul mareen kooxda Aston Villa waxana goolasha u furay waliba kooxdiisa ka jaray Sadio mane kaas oo si qurux badan u dhamaystiray fursad uu Naby Kieta u hor dhigay goolka hortiisa.
Xiddiga reer France ee Martail ayaa ku jira qaab ciyaareed cajiib ah isaga oo dhaliyay goolkiisii 4-aad 5-tii kulan ee ugu dambeeyay kulankii ay United garaacday kooxda Bournemouth.
Allan Saint-Maximin (Newcastle):
Xiddigan ayaa si deg-deg ah uga mid noqonaya xiddigaha ugu fiican ee u soo kacaya premier League, Xiddiga 23 jirka ah ayaa saamayn weyn ku yeeshay kooxda Newcastle iaga oo qaab ciyaareedkiisa heer kale u qaaday xilli ciyaareedkan.
Goolhayaha reer Brazil ayaa 9 kulan ku seegay dhaawac xilli ciyaareedkan laakiin waxa uu hogaaminayaa Tartanka Gacanta dahabka ah ee nadaafaca shabaqa isaga oo kulankii Aston Villa u diiday in laga dhaliyo gool waliba sameeyay badbaadino cajiib ah.
Weeraryahankan ayaa ku dhibaatooday dhanka qaab ciyaareedka tan ilaa markii dib loo bilaabay xilli ciyaareedka laakiin waxa uu Abaarta goolasha ka baxay kulankii ay kooxdiisu guusha ka gaadhay Crystal Palace isaga oo isku qoray taariikhda premier League kadib markii uu dhaliyay goolkiisii 100-aad ee premier League.
Da’yarkan ayaa soo qaatay todobaadkiisii ugu fiicnaa xirfadiisa ciyaareed ilaa haatan kadib markii uu gool ugu dabaal dagay heshiiskii cusbaa ee uu u saxiixay kooxdiisa, isaga oo gool ka dhaliyay kooxda Wolves waxana uu noqonayaa xiddiga ay ugu jecelyihiin taageerayaasha Gunners.
RASMI: Quique Setien Oo Soo Saaray Liiska Xiddigaha Uu Kaga Hor Tagi Doono Espanyol.